Wednesday June 14, 2017 - 14:54:59 in Wararka by Super Admin
hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa la xiray
Boqolaal kun oo dibad baxayaal ah ayaa isugusoo baxay magaalooyinka waaweyn ee wadanka Ruushka kuwaasi oo ka cabanaya musuq maasuq iyo sicir barar ku yimid maciishadda daruuriga u ah nolosha.
Wararka ka imaanaya magaalada Moscow ee caasimadda wadanka Ruushka ayaa sheegaya in kumanana qof oo taageersan axzaabta mucaaradka ay isugusoo baxeen waddooyinka iyo fagaraayaasha waaweyn waxayna ku qeylinayeen erayo kadhan ah xukuumadda uu hoggaamiyo Faladamiir Puntin hoggaamiyaha dowladda Ruushka.
Afhayeen u hadlay Booliska Ruushka ayaa warbaahinta usheegay in ay xireen 1500 oo qof kuwaas oo lagu eedeeyay in ay geysanayeen falal kharbudaad ah, wakaaladda wararka Ruushka ufaafisa ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen Alexey Navalny oo ah hoggaamiyaha mucaaradka ruushka kaasi oo lagu eedeeyay in uu soo abaabulay dibad baxyada gilgilay wadanka oo idil.
Muuqaallo lagasii daayay Telefeshinada waxay muujinayeen boqolaal kun oo qof dibad baxayaal ah oo buuxiyay qaar kamid ah waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka Moscow iyo St.Petersburg oo ah labada magaalo ee wadanka ugu weyn, kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay Puntin in uu musuq maasuq iyo dhaqaale xumo uhorseeday wadanka sanadadii uu xukunka hayay.
Sirdoonka Ruushka ayaa ka digay in haddii dibad baxyadu sii socdaan ay sababi karaan falal ammaan darro iyo in xoogag islaami ah ay ka faa’iideystaan dulduleelada ammaanka ayna geystaan weeraro jihaadi ah oo lamid kuwii bilo ka hor ruushka ka dhacay magaalada St.Petersburg .
Dowladda Ruushka ayaa ladaalaa dhacaysa hoos udhac dhanka dhaqaalaha ah kadib markii malaayiin dollar ah ku bixisay duullaanka gardarrada ah ee Suuriya lagu qaaday, sidoo kale cunaqabateyno dhanka ganacsiga ah oo Mareykanka iyo midowga Yurub ay kusoo rogeen xukuumada Moscow ayaa xaaladda sii adkeysay.